Daadad waxyeello gaystay oo ku soo rogmaday agagaarka dagmada Xudur | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Daadad waxyeello gaystay oo ku soo rogmaday agagaarka dagmada Xudur
Daadad waxyeello gaystay oo ku soo rogmaday agagaarka dagmada Xudur
Sanadadii la soo dhaafay dooxyo ka samaysmay agagaarka wadada aadda dhanka waqooyi ee magaalada Xuddur ayaa si joogto ah daadad ku soo rogmaday saamayn wayn ugu yeesheen dhaq dhaqaaga ganacsiga, tacbashada beeraha, isu socodka gaadiidka iyo dadwaynaha bulshada ku nool xaafada Buulow.
Saamaynta xilliga togagga daadadka soo fatahaan waxa aad looga dareeymayaa maciishada cuntada quutul daruuriga oo cirka isku shareerta, beeralayda qudaarta beerata oo daadadka kala tagaan, inka badan saddex kun oo qoys oo daggan xaafada Buulow oo guryahooda kabarakacay iyo cuduro ka dhasha biyaha.
Qaar ka mid ah beeralayda ganacsatada barakacayaasha dadka daggan xaafada Buulow iyo bulshada inteeda kale ayaa maamulka gobolka Bakool ugu baaqay in ay wax ka qabtaan dhibaatada ay ku qabaan roobabka daadadka wata ee beerahooda dhibaatada u gaysta.
Maamulka gobolka Bakool iyo kan deagmada Xuddur oo ka duulaya codsiga bulshada iyo caqabadaha jira ayaa kormeer ku tagay boholaha biyaha keena oo xiligaan aad looga cabsiqabo in biyo bax sameeyaan, waxayna baaq u direen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha deeq bixiyaasha in ay gacan ka siiyaan sidii biyahaan xal loogu raadin lahaa.
Daadad waxyeello gaystay oo ku soo rogmaday agagaarka dagmada Xudur was last modified: October 12th, 2020 by Admin
Wararkii u dambeeyay Qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay Muqdisho